Zvino izvo zvinoita sekunge Maka Gurman abuda mudenderedzwa reApple leaks Mushure mekuenda kunoshanda kuBloomberg uchisiya 9to5Mac, Evan Blass, anonyatso kuzivikanwa mu = Android nyika nekuda kwehuwandu hweruzivo rwunodonha kubva kumatemu eApple, akazivisa izvozvo Apple ichaunza inotevera iPhone 7 ichaunzwa muvhiki yaGunyana 12.
Iyo iPhone 7 ichiri iyo yakanyanya nhau dzevhiki. Mazuva mashoma apfuura takaburitsa mifananidzo mitsva iyo yatakaona maitire iye bhatani repamba rinogona kunge rakasiyana nemamodheru aripo. Apple inogona kushandisa chizvarwa chechishanu cheGorilla Girazi kudzivirira iyo skrini ye iPhone yedu kuti isatyora nekudonha kuri nyore uye sekureva kwemuongorori kuDeutsche Bank, Iyo iPhone 7 inogona kusanganisira maviri matsva maficha asina kuburitswa kusvika nhasi.
Vhiki rega rega mavhidhiyo matsva anoonekwa matinogona kuona kuti iPhone 7 ingave sei.Nguva ino takaburitsa vhidhiyo mairi iPhone 6s ichienzaniswa ne iPhone 7, uye kwatinogona kukoshesa misiyano mikuru yatinozopihwa neiyi new terminal munaGunyana. Mavhiki mashoma apfuura takakuzivisa nezve ongororo irimo Kwakataurwa kuti chete 14% yeazvino iPhone vashandisi inochinjana yako kifaa kune iyo nyowani modhi. Asi svondo rino isu takadzokorora mumwe mushumo unosimbisa kuti izvi muzana ichave chete 9%.
Isu tanga tichitaura kwemavhiki akati wandei nezve inofungidzirwa mhando nyowani inonzi Pro, iyo inogona kurova musika padivi peiyo iPhone 7 uye 7 Plus. Pane ino chiitiko tinokuratidza mufananidzo mune mune dzidziso ivo vanoratidzwa iwo matatu mamodheru ayo Apple anogona kuvhura munaGunyana. Kana iwe usati waneta neanodiwa Pokémon, mu iPhone News mumwe wedu Miguel akagadzira madhairekitori mazhinji kuti tikwanise kunakidzwa nemutambo uye tsvaga Jolteons, Vaporeon, Flareon kana chero zvavanodaidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone